This Hafiz student together with his 27 fellow students and about4teachers were killed, burnt while they were alive | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ ဓားခုတ်ရာ လက်မလျှိုမိကြစေဘုိ့
ဗမာစစ်အစိုးရက- အလှူရှင်တွေ အာရဗီကျောင်းသားတွေနဲ့ မိဘတွေမင်္ဂလာပွဲသွားတဲ့ မိသားစုတွေ-သတို့သမီး သတို့သားတွေ- ထမင်းချက်သူတွေကို ပါမချန် TERRORIST တီရှပ်တွေ ၀တ်ပေးနေပါပြီ- »
This Hafiz student together with his 27 fellow students and about4teachers were killed, burnt while they were alive
This Hafiz student together with his 27 fellow students and about4teachers were killed, burnt while they were alive and GOVERNMENT refused to give back the remaining bodies for proper burial and even never allowed to perform the last Rights and Prayers. And about 200 Myanmar Muslims were Martyred in those few days in Meiktila. No one was arrested for those Mass Murder.
President U Thein Sein, Mandalay PM Ye Myint, Home Minister Ko Ko, Military Chief of Staff Sr. General Min Aung Hlaing and Wirathu must take responsible for this killing of Muslim Student in Meiktila.
Request to open minded democracy loving Myanmars and NLD members. All those crimes are done by Swarn Arr Shins under the order of Myanmar Military Government.
Bama Buddhist NLD MP U Win Htein revealed openly to the foreign press that that morning alone he had seen 40 killings and dead bodies.
We could understand that at first you all keep quiet. (Not all but few bravely spoken out…TQ)
Now for ONE Ko Par Gyi suffered…WE all spoken out.
Myanmar Military dare to repeatedly do these MURDERS because you all keep quiet and believed their propaganda.
Please …please…kindly..open up your views against Military and its servant Swarn arr shins’ killings.
One monk who went to the Masjid to burn was killed by the2Muslims in the self defense. They run away immediately and were said to be in the rebel held area. Other INNOCENT Muslims were arrested for that crime which they never omitted but given long term jail sentences asarevenge.
ထီလာမြို့မင်္ဂလာဇေယုံမဒ်ရဆာအာရေကဗီအထက်တန်ကျောင်းက ကျောင်းသားငယ်ဟာဖွီးဇ်လေးတယောက်ကို ထီလာအကြမ်းဖက်မှု ၂၁•၃•၂၀၁၃ ရက်နေ့က
အကြမ်းဖက်သမားများနှင့် ဘုန်းကြီးများမှ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် ဒူးတုတ်စေပြီး လက်အုပ်ချီခိုင်းခဲ့ပေမဲ့ လက်မြှောက်ဒုအာတောင်းခဲ့တာပါ
ကလေး ၂၈ ယောက်အားရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်
ဓားနှင့်ခုတ် တုတ်နဲ့ရိုက် ခဲနဲ့ထု လှံ/မှိန်းနဲ့ထိုးပြီး
~~~Islamဘာသာဝင်ဖြစ်လို့ လူမဆန်တဲ့ယုတ်မာရက်စက်မှုတွေကျုးလွန်နေတာကို အားပေးကူညီသူများ စေခိုင်းသူများ ဉပဒေမဲ့လုပ်ရပ်အား လျစ်လျုရှုနေကြသော ဉီးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့
ဉီးရဲမြင့်& ဝီရသူတို့အပါအ၀င် အပြစ်မမြင်ပဲအရေးမယူပဲ အမျိုးသားရေးအုပ်စုအားထောက်ပံ့နေသူများဖြစ်နေကြတာပါ
ဒီကုရ်သာအရောင်သူ့မှာရှိမရှိပဲ သူ့ဖခင်အာလင်မ်ဆပ်ကိုမေးယုံပဲကျန်ပါတယ် သူရှဟီးဒ်မဖြစ်ခင်တပတ်လောက်က နမာဇ်အတူဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ•••••လူသားမျိုးနွယ်အချင်းချင်း ဘာသာမတူခြင်းက ရန်မူစရာအကြောင်းမဟုတ်ပါ ဉပဒေမဲ့တိုင်းပြည်မဟုတ်သည့်အတွက် အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ရပ်ကြည့်နေကြတာ လျစ်လျူရှုနေကြတာမျိုးမဖြစ်သင့်ပါ
လုးံဝတာဝန်ယူရပါ့မယ် မြန်မာနိုင်ငံသားချင်းအတူတူ ဘာသာမတူမှုအပေါ် အစိုးရ အရာရှိအရာထမ်း အဆင့်ဆင့် မည်သူမဆို
~~~နိုင်ငံသားများ လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျနေချိန်မှာ ဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြုပြီး
ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းမှုတွေ စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်နေကြတာ မြန်မာဗုဒ်ဓဘာသာဝင်တွေဆိုတာ
အမည်ခံ fb မှပေးပို့ပါသည်
ဖြစ်ပါစေတော့လို့ မျက်ရည်ကျဆုတောင်းခဲ့မိတာလည်း ပြည့်ပါပြီ
~~~ရဗ်ဗနာ ဇွလမ်နာ လို့ အရှင့်ဆီမှာ ဆုတောင်းခဲ့ ဆုတောင်းဆဲပါ
Ya Allah Please save our Prophet PBUH
Aung Tin shared Mynn Soe Shwebo‘s photo.
ဘယ်သူ့ လက်ချက်လဲ။ လူမျိုးစုံ၊ ဘာသာစုံတို့ စဉ်းစားပါ။
(၁) လူ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာ တူသူအချင်းချင်းဖြစ်ဖြစ်၊ မတူသူတွေကြားမှာဖြစ်ဖြစ် ပြသနာဆိုတာ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု အမြဲရှိတတ်တယ်။
(၂) သို့သော် ပြသနာဖြစ်တိုင်း တူသူအချင်းချင်းဖြစ်ဖြစ်၊ မတူသူတွေကြားမှာဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် သတ်ဖြတ်ပြီး ဖြေရှင်းနေကြတာ မဟုတ်ဘူး။
(၃) အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူအချင်းချင်း တရားခံလုပ်ပြီး တရားခံအစစ်ကို ထွက်ပေါက်မပေးသင့်ဘူး။
(၄) ရခိုင်ပြည်နယ်က ရိုဟင်ဂျာတွေ၊ ပြည်မက မွတ်စလင်တွေ တစ်ဖက်သတ် ရက်ရက်စက်စက်ခံနေရတာ ဘယ်သူ့လက်ချက်လဲ။ တရားခံအစစ် ဘယ်သူလဲ။
အလက်ဇန်း ဒရိုက် ဂျိမ်းစ်
ကျွန်တော် (လုံးဝ) ဦးမညွတ်ခဲ့ပါဘူး…မေမေ
ဒီနေ့ဆိုတာကြီးကို ကျွန်တော် မကြုံချင်ဘူး။
ကျွန်တော် ကျေနပ်နေတတ်ပါပြီ မေမေ။
ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတစ်ခုလို မသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ မေမေဟာ
(ကျွန်တော် မေမေ့ကို အပြစ်မတင်ရက်ခဲ့ပါဘူး)
ကျွန်တော့် သွေးတွေ ခမ်းခြောက်မတတ်ပဲ။
ပဲဟင်းစားပြီး ပညာသင်ရတဲ့ အရသာဟာ
(တော်ရာမှာပဲ ပျော်အောင် ကျွန်တော် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်)
ဆရာတွေရဲ့  ကြိမ်လုံးအရသာ
မနက်စောစော ဝတ်ပြု ပြီးစာအံရတဲ့ အရသာတွေဟာ
စာတွေကိုလည်း ကျွန်တော် ကြိုးစားသင်ယူမိပြန်တယ်။
(သားလိမ္မာလေးပါလားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားပေးခဲ့ပါသေးတယ်)
အတင်းအကြပ် ဦးညွတ်ခိုင်းတယ် မေမေ။
အကြောက်တရားတွေနဲ့ နှလုံးသား မဖောက်ပြားလေနဲ့” ဆိုတဲ့
.မေမေ့ဆုံးမစကားလေး ရယ်ဝယ်ပိုက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်
ရလာဒ်ကတော့ မေမေနဲ့ ကျွန်တော် သေကွဲခဲ့ရတာပဲပေါ့။
(မေမေ…မျက်ရည်မိုးသည်းပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ဂုဏ်ယူပေးပါ)
သိခွင့်ရတဲ့နေ့က ကျွန်တော် ခရီးသစ်တစ်ခုကို ဦးတည်နေရပြီ။
အင်အားပြင်း အမုန်းတရားတွေအတွက် မနာကျင်မိပေမယ့်
“မျက်လုံးတစ်လုံးအတွက် မျက်လုံးတစ်လုံး” ဆိုတဲ့
(မေတ္တာဟာ အရာရာကိုအောင်မြင်စေနိုင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် အောင်မြင်ခဲ့ပြီ)
ကဗျာရေးသူရဲ့ ရင်ထဲကို ကျွန်တော် ခဏလေး အလည်သွားမိတာပါ။
သူ့နှလုံးသားက ပူလောင်လွန်းလို့ ကျွန်တော် အရှုံးပေးပြီး ပြန်ထွက်ခဲ့ရတယ်။
ဓါတ်ပုံ ရှင်းလင်းချက်- ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လနှောင်းပိုင်းတွင် မိတ္ထီလာမြို့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုများတွင် မင်္ဂလာဇေယုံ ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းမှ ကျောင်းသားငယ်လေးများ ကို ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်အား ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးပုံကို ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများမှ အွန်လိုင်း စာမျက်နှာဖြန့်ဝေနေသည့် ဓါတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
This entry was posted on November 9, 2014 at 1:33 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.